Libre-SOC, yekutanga CDC 6600-dhizaina yakavhurika yakasanganiswa chip | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Libre-SOC chirongwa chakaburitswa munguva pfupi yapfuura vasvika padanho rekugadzira yemuyero wekutanga bvunzo yeiyo OpenPOWER-yakavhurika sosi yakavhenganiswa hybrid CPU / GPU SoC muchimiro cheCDC 6600, mune iyo CPU, VPU uye GPU mirairo isina kupatsanurwa uye inopihwa mune imwe ISA yekudzora saizi uye kuomarara Chip.
Iyi ndiyo yekutanga yakazvimiririra yakazara Power ISA ASIC kunze kweBMM inova Silicon mumakore gumi nemaviri, sezvo ellMicrowatt yakachinjira kuSkywater 12nm munaKurume; zvisinei, inogadziriswazve neBMM, seyakasarudzika-yakagadzirwa mareferenzi dhizaini iyo Libre-SOC yakashandisa kuongorora.
Iyo purojekiti yakatanga kugadzirwa pasi pezita Libre RISC-V, asi yakanzizve Libre-SOC mushure mesarudzo yekutsiva RISC-V neOpenPOWER 3.0 Instruction Set Architecture (ISA).
Iko kuvandudzwa kwe Libre-SOC yakapihwa mari neNLnet Foundation, iyo yakapa mazana mana emamiriyoni euros kugadzira chip yakavhurika zvachose cSechikamu chechirongwa chekugadzira inovimbika uye yakavimbika hwaro hwehunyanzvi mhinduro. Iyo chip iri 5.5 × 5.9mm muhukuru uye inosanganisira 130 logic magedhi.
EIyo purojekiti inovavarira kugadzira yakakwana, yakazara yakavhurika uye yemadzishe-isina system pane chip (SoC) iyo inogona kushandiswa mune imwechete bhodhi makomputa, netbook, uye akasiyana akasiyana anotakurika michina. Pamusoro peiyo CPU-yakatarwa mirairo uye zvakajairika-chinangwa marejista, Libre-SOC inopa mune imwechete processor inoshanda block kugona kwekuita vector mashandiro uye akakosha macomputer akawanikwa muVPU neGPU.
Iyo chip inoshandisa iyo OpenPOWER kuraira seti yekuvaka, iyo Rakareruka-V kuwedzeredzwa nemirayiridzo yeku vectorize uye kugadzirisa data mune yakafanana, pamwe nemirairo yakasarudzika yekushandura kuita ARGB uye kuita chaiyo 3D mashandiro.
"Isu takagadzira ASIC iyi pamasikirwo ePower nekuda kwekuzvitutumadza kwayo uye nekuzvipira kwenguva yakareba uye kugadzikana kwakachengetedzwa neIBM nedzimwe nhengo dzeOpenPOWER Foundation," akadaro. Luke Kenneth Casson Leighton , Mutungamiri Mutungamiri uye Project Coordinator we Libre-SOC. "Pane hwaro hwakasimba uhu, tinogona kuvaka musanganiswa wakavimbika uye unobudirira 3D CPU-VPU-GPU, uye bvunzo yedu inotevera ASIC inosanganisira Draft Cray-style vector extensions, SVP64."
Iyo yeGPU yekuraira inotarisa pakushandisa neVulkan Graphics API uye iyo VPU mukuchinjisa YUV-RGB kutendeuka nekumisikidza MPEG1 / 2, MPEG4 ASP (xvid), H.264, H.265, VP8, VP9, ​​AV1, MP3, AC3, Vorbis uye Opus mafomati.
kunze kwaizvozvo yemahara Mesa driver iri kuvandudzwa iyo inoshandisa Libre-SOC kugona kupa hardware-yakakurumidza kuita software yeVulkan graph API. Semuenzaniso, Vulkan shaders inogona kuve JIT inoshandurwa kuti iitwe pachishandiswa mirayiridzo yakasarudzika inowanikwa kubva kuLibre-SOC.
Mune inotevera bvunzo prototype, ivo vanoronga kuita iyo SVP64 yekuwedzera (Variable-length vectorization), iyo inobvumira Libre-SOC kuti ishandiswe sevheti processor (kuwedzera kune makumi matatu neshanu-chinangwa 32-bit marejista, 64 marejista ekuverenga vector achapihwa). Iyo yekutanga prototype inosanganisira imwechete chete musimboti, inoshanda pa frequency ye128 Mhz, asi mukati memakore maviri zvakarongwa kuvhura 300-core vhezheni, kozoita 4-core vhezheni uye, mukufamba kwenguva, 8-musimboti vhezheni.
Batch yekutanga yechip ichagadzirwa kuTSMC ichishandisa tekinoroji ye180nm. Zvese zviitiko zveprojekti zvinogoverwa pasi pemarezinesi emahara, kusanganisira mafaera eGDS-II fomati ine tsananguro yeiyo yakazara chip topology, yakakwana kutanga yedu yekugadzira. Iyo Yemahara-SOC ichave yekutanga yekutanga yakazvimiririra chip isiri inoenderana neBMM Simba.
Iyo budiriro yakashandisa iyo nMigen hardware rondedzero mutauro (Python-based HDL, pasina kushandisa VHDL uye Verilog), iyo FlexLib standard cell raibhurari kubva kuChips4Makers projekiti, uye yemahara VLSI Coriolis2 toolkit yekushandura kubva kuHDL kuenda kuGDS-II.
Finalmente kune avo vanofarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo rwechirongwa pane yavo yepamutemo webhusaiti kana kune avo vanofarira kodhi yekodhi vanogona kubvunza izvi kubva pane iyi link iripazasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Libre-SOC, yekutanga yakavhurwa hybrid chip mune iyo CDC 6600 maitiro
Ubuntu Kubata OTA-18 yatouya neakaverengeka akakosha ekuvandudza